दाजूभाई नहुने नेपाली चलचित्रका यी सुन्दर अभिनेत्रीहरू कोको ? - ramechhapkhabar.com
दाजूभाई नहुने नेपाली चलचित्रका यी सुन्दर अभिनेत्रीहरू कोको ?
अभिनेत्री शिल्पा पोख्रेल पनि दाजु भाई नहुने अभिनेत्रीमा पर्छिन् । घरको जेठो सन्तानको रुपमा जन्मेकी उनकी एक बहिनी छिन् सोनिया । शिल्पा दाजुभाई नभएपनि तिहारमा खाली हात बस्नु पर्दैन । उनले निर्देशक विकाश रौनीयारलाई दाई मानेकी छिन् । उनी तिहारमा उनैलाई टिका लगाउने गर्छिन् ।
भिजे र मोडलपछि नायिका बनेकी अभिनेत्री पूजा शर्मा पनि घरकी एक्ली छोरी हुन् । उनका पनि दाजुभाई छैनन् । पूजाले आफू परिवारको एक्लो सन्तान भएका कारण पनि हुनसक्छ सानैदेखि निकै नै पुलपुल्लिएर हुर्केको बताउँछिन् । तिहारको समयमा उनी रानी पोखरी जान्छिन् । रानी पोखरीमा गएर तिहार मनाउने उनी पोहोर साल भुईचालो आएपछि भने त्यहाँ नगएको जानकारी पनि फर्सीनेटवर्कलाई दिएकी छिन् ।
लोफर, परदेशी, ब्रासलेट जस्ता सिनेमामा काम गरिसकेकी अभिनेत्री रजनी केसी परिवारकी एक्लो सन्तान हुन् । दाजुभाई नभएर पनि रजनीका लागि तिहार त्यति खल्लो भने हुने गरेको छैन । सानैदेखि नै छोरा जसरी हुर्केको हो म भन्ने रजनीलाई उनको परिवारले पनि छोरोको नामले सम्बोधन गर्ने गर्दछ । उनी आफू छोरी भएर जन्मेपनि घरमा भने छोराको रुपमा रहेको बताउँछिन् ।
अभिनेत्री संचिता लुईटेल घको जेठो सन्तान हुन् । उनका दाजूभाई छैनन् तर दुईजना बहिनीहरु सिवानी र समिता छन् । दाजुभाई नभएको हुँदा तिहारमा के गर्नुहुन्छ कसरी मनाउनु हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले जवाफ दिईन्– हामी दिदी बहिनीहरुले एकअर्कालाई टीका लगाउँछौ अनि तिहार मनाउँछौँ । एकदमै रमाईलो हुन्छ । दिदी बहिनीहरुले नै एकले अर्कालाई टिका लगाएर तिहार मनाउनुको मज्जा बेग्लै हुने संचिताको भनाई छ ।
बाग्मती अभिनेत्री श्रेया कार्की पनि दाजुभाई नहुने अभिनेत्री हुन् । उनीका एक दिदी शितल र एक बहिनी श्रेयुत्ता छन् । तिहारमा आफूहरु एकअर्कालाई टीका लगाएर रमाईलो तरिकाले मनाउने गरेका जानकारी श्रेयाले हामीलाई दिएकी छिन् । उनीहरुले नै एकअर्कालाई दाजूभाईकोे आवश्यकता पुरा गरिरहेका छन् ।